Tsia, tsy hiaro anao amin'ny Coronavirus | ny mpanadio rivotra Vaovao IPhone
Tsia, tsy hiaro anao amin'ny Coronavirus ny mpanadio rivotra
Betsaka aminareo no hanararaotra amin'izao andro izao mieritreritra ny gadget hovidinao manaraka hahatonga ny tranonao ho hendry kely kokoa. Misy dikany, amin'ny farany ny fandaniana fotoana any an-trano dia mahatonga antsika hanana hevitra vaovao hanatsarana ny rafitra fanamafisam-peo, ny varavarankely an-tsaintsika, na koa ny fanaovana ny jiro rehetra ao an-tranontsika ho voafehin'ny fitaovantsika. Ary anio dia te hiresaka momba azy isika fanadiovan-drivotra voalohany amin'ny HomeKit, eny, aza raisina ho toy ny fomba hiarovana ny tranonao amin'ny Coronavirus ... Aorian'ilay fitsambikinana dia lazainay aminao bebe kokoa momba ity fanadiovan-drivotra vaovao ity izay mifanentana amin'ny HomeKit an'ny Apple.
Vao natolotry ny tovolahy tao amin'ny HomeKit News, mpanadio rivotra vaovao Vocolinc izay efa azo vidiana amin'ny tsena eropeana amin'ny fandefasana 11 andro ihany. Manana vidiny manodidina ny 447 euro, ary eo amin'ireo endri-javatra misy azy dia ahitantsika sivana rivotra misy sivana HEPA avo lenta. Raha ny hevitr'izy ireo dia afaka manala hatramin'ny 99.5% ny gazy sy ny sombiny lehibe kokoa noho ny microns 0.3 avy ao amin'ny efitranontsika, ary ny zavatra tsara indrindra dia ny manarona faritra hatramin'ny 100 metatra toradroa. Ity no lazain'izy ireo amintsika avy amin'ilay orinasa mihitsy:
Manadio rivotra marani-tsaina, mamoaka tabataba ambany dia ambany: 27dB amin'ny fomba torimaso, fizarana rivotra madio lehibe: hatramin'ny 100 metatra toradroa, fahaiza-manadio rivotra mahomby: onjam-peo bi-directional, HEPA marina ary karbaona navitrika: haitao telo sivana, hazavana miisa 5 nohazavaina tondro, Miasa amin'ny: Google Home, Amazon Alexa ary Apple HomeKit.
Fantatrao izao, raha mieritreritra fanadiovan-drivotra ho an'ny tranonao ianao dia mety io safidy lehibe noho ny safidin'ny fifandraisana izay arosony amintsika ary ny mety hifehezana azy amin'ny lavitra misaotra an'ireo. Mazava ho azy, rehefa niresaka momba izany isika tsy misy ifandraisany amin'ny Coronavirus koa aza manapa-kevitra amin'ny fitaovana toy izao hiarovan-tena. Ho an'ity efa fantatrao ity dia mijanona ao an-trano ary mitazona fahadiovana madio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Tsia, tsy hiaro anao amin'ny Coronavirus ny mpanadio rivotra
Sary natolotry ny WWDC 2020